Knowledges Zone: Anti-virus ရန်ကင်းဝေးစေရန်.........ဖုန်းအတွက်ရော..ကွန်ပျူတာအတွက်ပါ
Dr.Web Mobile Security Suite serial number
နောက်ပြီးကိုယ်ရဲ့မေးထဲမှာ………. serial numberပို့ပေးပါလိမ့်မယ်…..
မေးထဲကserial number ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ…….လုပ်ပြီးသွားရင်
အရင်ဆုံး Update လုပ်လိုက်ပါ………ပြီးသွား၇င်တော့ဖုန်းမှာ
full scan လုပ်လိုက်ပါ……Anti-virus ရန်မှစိတ်ချလို့ရပါပြီ…
Free Anti-virus အများကြီးထဲက………ကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့
အဲဒါကတော့ ESET Anti-virus ကြိုက်တာကိုဒေါင်းသွားပါ...ကျွန်တော်ကတော့ESET Smart Security4ကိုသုံးပါတယ်
သူကိုသုံးမယ်ဆို username & password တောင်းပါတယ်………..
ခဏလောက်စောင့်ပြီးမေးကိုဝင်ကြည့်ပါ…….. username & password ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
ESET NOD32 KEYS |Latest updates|FRESH username and password
သူငယ်ချင်းတို့မှာFace Book အကောင့်ရှိရင် nod32 username and password ဒါမှမဟုတ်
nod32serial.cz.cc အဲမှာဝင်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်……..သူတို့တွေကအမြဲUpdate လုပ်ပေးနေပါတယ်………. username & password ကို……..ကြည့်ရပျင်းနေရင်တစ်ခါတည်းယူသွားဗျာ
ထည့်နည်းကတော့ အရင်ဆုံး ဒေါင်းရတဲ့ဖိုင်ကို ဖြေလိုက်ပါ
ပြီးရင် ဖိုင်ထဲမှာ ပါလာတဲ့ (eofu8664) ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို ကလစ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် Next ကိုပဲကလစ်လိုက်ပါ ပြီးရင် ကိုယ်ထည့်ထားတဲ့ Bit ကိုရွှေးပေးပါ (32/64) အဲ့ဒါ တစ်ခုခုပေးလိုက်ပါ Next ကိုပဲကလစ်လိုက်ပါ ပြီးရင် ပေါ်လာမည့် C:\_Update ဆိုတဲ့စာလေးကို Copy ကူးလိုက်ပါ Next ကိုပဲကလစ်လိုက်ပါ
တစ်ခုခုမေးလာရင် yes ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် start ကိုကလစ်လိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ ထွက်လိုက်ပါ။
(၁) Install လုပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ ပုံ (၁) အတိုင်းဖြစ်နေရင် အနီပြထား သောနေရာတွင် ကလစ်လိုက်ပါ
(၂) yes ကိုလစ်လိုက်ပါ
(၃) ကီဘုတ်က ( F5 ) ကိုနိပ်လိုက်ပါ
(၄) Update ကိုကလစ်လိုက်ပါ
(၅) Edit ကိုကလစ်လိုက်ပါ
(၆) ပြီးရင် Update servers ဆိုတဲ့ ကွက်လပ်လေးမှာ ခုနက Copy ကူးထားတဲ့ C:\_update လေးကိုထည့်လိုက်ပါ
ပြီးရင် Add ကိုကလစ်လိုက်ပါ Ok ကို ကလစ် ပြီးရင် Update ကိုကလစ်လိုက်ပါ
လုပ်ပြီးရင် Ok ကို ကလစ် လိုက်ပေါ့ အားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီ ကဲသဘောပေါက် မယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ESET NOD32 Antivirus ထဲက Version of virus signature database မှာ ဘယ်လောက် ရှိနေလဲ ဒီထက်နည်းနေရင်
ဒီကောင်ထည့်လို့ ရပါတယ် များနေရင်တော့ မရပါဘူး အဲ့ဒါလေးတော့